Ngaba UThixo Uyayiva Imithandazo Yethu Aze Ayiphendule?
Ngaba Ukho Umntu Owuphulaphulayo?
Kutheni UThixo Efuna Sithandaze?
INQAKU ELINGUMXHOLO | KUNCEDA NGANTONI UKUTHANDAZA?
Abanye abantu bacinga ukuba umthandazo yinkcitha xesha, akakho umntu owuphulaphulayo. Abanye baye bazama ukuthandaza, kodwa bathi abaphendulwa. Omnye umntu ongakholelwayo kubukho bukaThixo, owayenento acinga ukuba uyiyo uThixo engqondweni yakhe, wathandaza wathi: “Okungenani ke ndisebezele.” Kodwa uthi uThixo “watya tyum.”
Nakuba kunjalo, iBhayibhile iyasiqinisekisa ukuba ukho uThixo ibe uyayiva imithandazo. Yathetha la mazwi kwakude kudala: “Nakanjani na [uThixo] uya kukubabala esandini sesikhalo sakho; kamsinya nje akusiva okunene uya kukuphendula.” (Isaya 30:19) Enye ivesi yeBhayibhile ithi: “Umthandazo wabathe tye uyakholiswa nguwo.”—IMizekeliso 15:8.
UYesu wathandaza kuYise, waza “waviwa ngokukholekileyo”—Hebhere 5:7
IBhayibhile inemizekelo yabo yaphendulwayo imithandazo yabo. Enye ivesi ithi uYesu ‘wakhunga kuLowo wayekwazi ukumsindisa’ ibe ‘weviwa ngokukholekileyo.’ (Hebhere 5:7) Eminye imizekelo inokufunyanwa kuDaniyeli 9:21 nakweye-2 yeziKronike 7:1.
Kutheni abanye abantu bevakalelwa kukuba imithandazo yabo ayiphendulwa? Ukuze umthandazo wakho uviwe kufuneka uthandaze kuThixo weBhayibhile, uYehova, * ungathandazi komnye uthixo okanye kwizinyanya. Kwakhona uThixo ufuna kuthandazwe “ngokuvumelana nokuthanda kwakhe,” kuthandazelwe izinto akholwayo zizo. Ukuba senjenjalo, uThixo usiqinisekisa ukuba “uyasiva.” (1 Yohane 5:14) Ngaloo ndlela, ukuze imithandazo yethu iviwe, kufuneka sazi uThixo weBhayibhile size sazi nokuthanda kwakhe.
Abantu abaninzi bakholelwa ukuba umthandazo ayisosicengcelezo nje, kodwa uThixo uyawuphulaphula aze awuphendule. UIsaac, waseKenya, uthi: “Ndathandazela ukuba ndincedwe ndiqonde iBhayibhile. Akuzange kube kudala emva koko mntu uthile weza kum wandinceda.” UHilda wakwiiPhilippines, wayefuna ukuyeka ukutshaya. Emva kokusilela izihlandlo eziliqela, umyeni wakhe wathi: “Kutheni ungakhe uthandazele uncedo kuThixo?” Emva kokuba elisebenzisele elo cebiso uthi: “Ndikhwankqisiwe yindlela andincede ngayo. Ndasuka ndayeka ukunqanqatheka. Ndayeka nokutshaya.”
Ngaba uThixo uyafuna ukukunceda kwiingxaki zakho xa zivisisana nokuthanda kwakhe?
^ isiqe. 6 UYehova ligama likaThixo elichazwe eBhayibhileni.